Umkhiqizi nomhlinzeki we-log debarker Isitolo esidayisa yonke impahla | Ukuxubana
Ama-roller angama-roller kanye nama-roller angama-double awuhlobo lwe-mace olwenza kube lula ukubamba izingodo nokukhulisa ukusebenza kahle kokumaka. Lo mshini usebenzisa inqubo yokusika eyi-rotary ye-non-chuck rothe lathe, umfutho we-hydraulic drive ungene ezakhiweni, ungasusa amagxolo ngokushesha nangempumelelo futhi uqedele ukubhala umsebenzi oyindilinga.
1.imodeli yokuchoboza engakwazi ukuchoboza imfucumfucu emenyezelwe ukuthuthwa nokusetshenziswa okulula.
2. imodeli ejwayelekile ngaphandle kokuchoboza
Ifektri yethu nayo inikezela ngesevisi ye-OEM, singakunikeza umshini njengezidingo zakho.
Sithengiswe kakhulu ngomshini we-debarker ne-peeling nemishini ehlobene nayo ekwenzeni i-veneer. Futhi phakathi nale minyaka yentuthuko, sinezisebenzi ezimbalwa emazweni ahlukahlukene ezenza umsebenzi wokusabalalisa nokudayisa nokuthengisa wonke. Futhi lolu hlelo lwe-ejenti lusisizile nokuthi sithole igama elingcono ngemuva kwensizakalo yokuthengisa. Ngoba abenzeli bethu bayakwazi ukuya kusayithi lamakhasimende futhi baxazulule izinkinga futhi banikeze izeluleko.
Ngisho kulawo mazwe angenawo umenzeli, awudingi ukuthi ukhathazeke ngensizakalo. Ngoba sineqembu lethu lesevisi eku-inthanethi elingasiza amakhasimende ukuxazulula inkinga ngekholi yevidiyo.
1.After the amagxolo uyaxebuka ayengavikela uyaxebuka ummese ku yokwakha yaseGrisi uyaxebuka isinyathelo, ngcono ibanga yokwakha yaseGrisi
Isebenzisa i-rotary cutting principle ye-lat-rotary lathe lathe
Ingcindezi engu-3 umfutholuketshezi ungene ezakhiweni, ungasusa amagxolo ngokushesha nangempumelelo futhi uqedele ukungena kulo msebenzi oyindilinga
Umshini owodwa we-debarker ungakunikeza nge-lathe emibili ejikelezayo, ugcine abantu abahlanu noma abayisithupha
5.Hydraulic yokudla, kungaba debarking futhi roundup amancane log okuluhlaza
Intengo 6.Competitive kanye nekhwalithi
Langaphambilini ummese wokusila
Olandelayo: umugqa ukukhiqizwa plywood